Nge 'Uknowhatimsayin¿,' uDanny Brown ushukumisa uloyiko olukhoyo - Rap
Ngaba Ayisiyiyo Imincili? UDanny Brown ushukumisa uloyiko olukhoyo.
Nokuba uDanny Brown ubona kufanelekile ukuba avale, awungekhe uthi amandla akhe okuvula ayingawobuqhawe. Khetha nje nayiphi na ingoma kaDanny Brown-masithi 30, ukusuka ngo-2011 I-XXX -Kuye nantso ke, ethimba ingqalelo yakho phezulu ukuze uyihlawule kwakhona kwisithuba semizuzu emithathu okanye elandelayo: Uthumele i-bitch yakho ye-dick pic, kwaye ngoku ifuna iiglasi. Kwaye eneneni, ayisiyiyo nje ingqalelo yakho enesidingo esingxamisekileyo, uyayigxininisa kwintlonipho yakho, nayo. Iivesi ezine ezityhafisayo kwingoma yokugqibela kwitape yakhe yokuphumelela, ayikhuphile eneminyaka engama-30, uxela ukuba ngoyena rapper mkhulu. Ayisiyonyani kodwa okomzuzwana ivakalelwa ngokugqithileyo.
Ukulwa yenye yezo zehlo xa uBrown ekubamba ngesitshixo: andikuniki mdla / ndingathetha ikati ngasemva kwiloli yentlanzi. Ingqungquthela iyahamba. Iimpondo ziyaqhuma zize ziphume, ngokungathi ingoma leyo ibilayo. Umoya uyacamngca, kwaye iiraps ziyaphela: Ulandela inyani enkulu enesinqe esincinci kunye ne-butt enkulu, kodwa emva koko uyadlwengula malunga neminyaka awayeyichitha ethengisa kunye nokusebenzisa gwenxa iziyobisi, umlo wasesitalatweni, umlo wakhe wokulwa nokubuyela kwimeko yesiqhelo, Kwaye, ewe, ukwazile ukwenza isingqisho hashi, ubugcisa, izibalo, kwaye ngandlela ithile kwisithuba semizuzwana eli-15. Uvakala ngathi uyaqina, kodwa womelele. Ukuthetha no Ndididekile ekuqaleni kwale nyanga , UBrown wathi usebenza noQ-Tip-ngubani olawulayo ovelise icwecwe lakhe elitsha, NONE , kwaye uboleka into kwi-Combat-waphefumlela ubomi obutsha kubudlelwane bakhe nomculo we-rap, ohleli ungumnqa.
Njengakwi, kunzima ukutsho ngqo ukuba loluphi uhlobo lwendawo aluphetheyo kuyo. Ngo-2011, uye wawa phantsi kwipleyiti yakho njengepopu yehagu yekhathuni ukusuka Inkomo kunye neNkukhu -UBrown, umrepha waseDetroit, wayenamazinyo aqingqiweyo kunye noburharha obungenakuphikiswa. Kwaye yakhe iinwele. Iinwele zakhe zazivunyelwe kodwa zinekratshi kwaye zixinekile, kufaneleka ukungazinzi komculo wakhe. Wayephumile kwisandi nakwimfashini, kwaye wayehenda kum ngokobuqu, eneminyaka eyi-19, edlala ngezinto ezininzi okokuqala. Zimbalwa iingoma ezazinexesha le-epochal yekholeji ebekwe njengoKhulileyo-eyenze malunga noluhlu lokuphela konyaka luka-2012- bambalwa ubomi babaculi abazive bebotshelelwe ngakumbi kumgaqo we-electro-trap-dubstep indie ongasekhoyo kwaphela. UBrown wayenengubo yomthala yengubo yasesitalatweni ngaphambi kokuba naliphi na i-rapper ye-SoundCloud ikwazi ukuhambelana ne-jean e-skinny kunye nengubo yoboya, kodwa wayezinikezele kwintloko endala ekuqwengweni-njenge, ukudlwengula ukudlwengula; ngezikimu zangaphakathi zemvano-siphelo imigca yokubetha kunye nayo yonke into-kuba, kulungile, yena wayenjalo indala.
UBrown naye unobuchule bokubuyisela kwakhona-ngokwenene iyahamba ngecwecwe elitsha ngalinye. I-XXX ibonakaliswe kukulangazelela impumelelo. Ukufa njengeRockstar wenza impumelelo yinto yobomi bakhe-angangaphezulu kwento azalelwe kuyo, okanye angabi nto kwaphela. Kukonke, I-XXX yayimalunga nesoyikiso sokuzibandakanya kuwe nakwabanye. Endala yayimalunga nesothu esikhoyo sokudibana kunye. Umboniso Woburhalarhume yayimalunga nento eyoyikisayo yokuba usaphila.
Uknowhatimsayin¿ yicwecwe lakhe lesihlanu, kwaye uhlala evakala njengengoma yesandi kwi-VHS ye-porno yecampy edlala kwi-TV ebekwe eludongeni kwivenkile yevidiyo yokugqibela eMelika, kwaye ewe le yinto elungileyo. Ilizwi likaBrown-elichasayo inkcazo kwaye ke limema ezingaqhelekanga-linokufana nesivunguvungu kwindudumo. Njengakuqala, ikhanyisa amazwi akhe amfiliba, inika uDealt ngeentlungu ezininzi kangangokuba andazi nokuba yintoni feelin ’bubunyulu obuthile. Kodwa nangoku ukuphelelwa lithemba, umbono wokuba indlela yakhe yokuphila ixhomekeke koku, akusekho apho.
Isikakhulu kuba: Ngokwenene ayenzi. UBrown unomboniso wentetho IViceland ngoku. Uthenge uncumo olutsha; iinwele zakhe ziye zathanjiswa zaba kukunqunyulwa okunengqondo kukaKesare. Uneebhithi ezininzi ezivela kwi-Q-Tip kwi-Abstract, kwaye enye ivela kwiJPEGMAFIA. Uknowhatimsayin¿ unomgangatho weprojekthi yokuthanda, njengeqela labahlobo abakhulu ababelana ngesofa kwigumbi lokugcina iStones Phosa ixesha elingenamkhethe, kwaye ucofe izinto ze-craziest ukuze zikhululwe. Iskena ngakumbi njengomsebenzi wothando kunokuswayipha kwisithsaba.
Musa ukungaqondi kakuhle: UBrown usadlwengula, njengokuba kunjalo ukudlwengula ukudlwengula. Eyona nguSavage Nomad-uyangena kwisithuba esiphakathi NONE Ixesha lemizuzu engama-33 lokubaleka. Amagita akrazula ingoma evulekileyo, kwaye avakala ngokungathi ziilori zomlilo. Amaqhosha angaphantsi kwengcebiso ye Amapolisa umxholo. Inkunkuma iyatshisa ezitalatweni, kwaye uBrown ucinezela ama-assonants kwii-couplets ngokungathi ndikulo matte mnyama 'Lac, mac phantsi komgangatho womgangatho / Indoda yemozulu, ndiyaxela kwangaphambili. Akukho nto ikhonkco yokuthetha ngayo: UBrown uvumela ukuhleka okungathandekiyo ngaphambi kokuntywila kwindinyana elandelayo. Ngubani ocinga ukuba ujongana naye / ukuhamba kwezibalo zaseTshayina. Kukungxama emva, kodwa akenzi kakhulu kunokubonisa. Kwaye akukho nto iphosakeleyo kuloo nto.
isityebi homie quan 2018
ujulio urias pickoff ushukume
uNick noJessica abasandul 'ukutshata
kid ekufumaneni nemo
Izinto eziphambili eziyimfama